Iziko elinomtsalane elicaba ledolophu yakudala. I-WIFI - I-Airbnb
Iziko elinomtsalane elicaba ledolophu yakudala. I-WIFI
Igama lam nguAntonio kunye nendlu yam kwidolophu yakudala yaseSantiago de Compostela iyafumaneka. Ngokugqibeleleyo esembindini kwaye ikufutshane nazo zonke izinto eziluncedo (ukuhamba ngemizuzu emi-5 kuphela kwiCathedral edumileyo)
Igama lam nguAntonio kunye nendlu yam kwidolophu yakudala yaseSantiago de Compostela iyafumaneka. Ngokugqibeleleyo esembindini kwaye ikufutshane nazo zonke izinto eziluncedo (ukuhamba ngemizuzu emi-5 kuphela ukuya kwiCathedral edumileyo), ukanti kwindawo ezolileyo eluhlaza apho unokuxinezeleka emva kosuku olunzima lokuyibona iqhayisa ngayo yonke into oyifunayo ukuhlala okumnandi kwesi sixeko sinomtsalane.
Le flethi imi kumbindi wedolophu entle endala yaseSantiago. Ngaphandle kokuba isembindini wayo yonke into kwaye ikufutshane nazo zonke izinto eziluncedo, iflethi ngokwayo yindawo ezolileyo yokulalisa intloko emva kokubona indawo enzima yosuku. Isandul 'ukulungiswa kwaye iqhayisa ngayo yonke imod cons ukwenza ukuhlala kwakho kukhululekile ngokusemandleni (umatshini wokuhlamba, umshini wokomisa iinwele kodwa okona kubaluleke kakhulu kwi-WIFI kunye neNetflix). Le ndawo inamathuba angenasiphelo xa kufikwa ekugqityweni kwexesha elinje ngeendawo zokutyela ezininzi, itiyetha, iikonsathi, iimyuziyam, izakhiwo zembali, amathala eencwadi, iyunivesiti kwaye ngokuqinisekileyo imarike edumileyo ye-abastos, indawo yesibini etyelelwe kakhulu eSantiago. emva kwecathedral. Kulapha phambi kwemarike (kuhambo nje olufutshane lwemizuzu emi-5 ukusuka eflethini) apho uya kufumana isikhululo sikaloliwe ukuba unqwenela ukuhamba uphume esixekweni.
Umgangatho wesibini iflethi, (akukho lift ifumanekayo kwizakhiwo ezininzi kwidolophu endala) ikwimeko entle ngenxa yokuba nangona isembindini wedolophu endala ingqongwe yindalo, kufutshane neBelvis park, indawo entle. indawo eluhlaza enegadi apho ungaphumla khona ngemini enelanga ekunika ezona hlabathi zimbini kulo lonke ixesha lokuhlala kwakho.
Le yindawo egqibeleleyo yokubalekela isibini. Indawo inegumbi elinye lokulala elinebhedi ephindwe kabini (135 x 190), igumbi lokuhlala eligcwele isidlali-rekhodi okanye isiginkci ukuba uziva unomculo, ikhitshi yesitayile saseMelika ene-oveni, imicrowave, ifriji kunye negumbi lokuhlambela elibandakanya ishawari yokufihlakala.
Ukukhula apha eSantiago ndiyayazi njengomva wesandla sam kwaye ndithetha isiNgesi kunye neSpanish. Ndonwabile ngakumbi ukunceda kwaye ndicebise ukuba ufuna naluphi na uncedo kuyo yonke imisebenzi yokucwangcisa kwindawo efana nokuhamba intaba, iindlela zedolophu, iindlela zenkcubeko, uhambo oluya kumalwandle amangalisayo eGalician, iingcebiso malunga nokuba ungatya phi okanye usele okanye naziphi na ezinye iindawo. umdla.
Ukuba ujonge iflethi esemgangathweni, kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo kodwa enoxolo ngokwaneleyo ukuze ufumane ubusuku obuhle bokulala kwaye kufutshane nendalo apho unokufumana incasa yendlela yobomi ye-galician ke le yiflethi yakho.
4.87 · Izimvo eziyi-412
Inombolo yomthetho: TU986D RITGA-E-2017-008377